Abenzi be-PMMA Acrylic kunye nababoneleli - China PMMA Acrylic Factory
Iibhotile ＆UKUPHATHA, INC.
Iphakheji yeBhola eRoli
Ihenjisi eziPhezulu zeZitya
Ijeli yelungu lobufazi ityhubhu
Oonobumba kunye nokuValwa
Iimpompo kunye nezitshizi
Ingcebiso yeKhabhu yomlomo omde
Inkonzo kunye nezixhobo
Ibhotile kunye nokuvavanywa kokuhambelana kwemveliso
I-7 oz yebhotile ejikelezayo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokugqitywa kwentamo engama-38-410
1.7 oz iHDPE emnyama ibhotile tyaba nge entanjeni 12-410 entanyeni
17 oz ezipinki PETG square ulwelo nge 28-410 nec ...
Ibhotile ye-2 oz emhlophe ye-hexagon ene-34-400 yokugqiba kwentamo
0.33 oz 10ml ecacileyo PMMA (Acrylic) ibhotile yeplastiki yokutshiza nge-20-410 yokugqiba kwentamo
Ibhotile yethu yokutshiza emhlophe eyi-10ml yenziwe ngezinto ze-PMMA. I-100% yentsha entsha kunye nomgangatho ophezulu.Yenziwe ngeplastikhi, enokuphinda isebenze, inqabile kwaye inyangeke ngokufanelekileyo.Ilungele i-toner, amanzi e-essence kunye namanzi otywala. Impompo yokuthambisa yokumpompa inokuthathwa kwinqwelomoya, itywinwe kunye nobungqina bokuvuza. Umthamo womndilili we-extrusion ngexesha ngalinye yi-0.13 ml. Isitshizi sebhotile yeziqholo sinokurisayikilisheka kwaye akukho doti lamanzi lichithwayo. Inkonzo ye-OEM: Ilogo yoshicilelo lwesilika yesilika, ileyibhile yePhepha, ileyibhile yePlastikhi, shwabanisa ukugoba Kulula ukuyisebenzisa kwaye ucoceke ngokuhlambekayo kwaye uphinde uzalise. Ubungakanani obuncinci bulungele ukuhamba okanye ukugcinwa kunye nokulungelelaniswa kwekhaya. ibhotile yokutshiza epokothweni
I-4 oz icacile i-PMMA (Acrylic) yeplastiki ebanzi yomlomo webhotile ene-40-400 yokugqiba kwentamo
Iibhotile zeplastiki zethu ezi-2 zeGallon zeNdalo (Acrylic) zizikhongozeli ezigqwesileyo kwizicelo ezahlukeneyo kunye neemarike. Umbala ocacileyo webhotile yeplastikhi yeemveliso zononophelo lwempilo ibhotile. ukuthengisa kunye nokuphucula ukubonakala komboniso wakho. Intamo yomlomo ebanzi engama-40-400 yenza kube lula ukugcwalisa kunye nokususa iimveliso.
Yintoni into yokubumba ngaphandle kwembaleki
Ngokubanzi, kwinkqubo yokubumba ngenaliti, izinto ezinyibilikileyo ezivela kumbhobho kungena kwisikhunta, ngejelo eliqhelekileyo, ijelo lokuphambuka kunye nesango emngxunyeni, nakwisipholisi sokubumba seplastikhi, ukuqina kokupholisa, kunye neemveliso zebhanti. Ke ngoko, xa ungena kwi-secon ...
Amayeza okupakisha amashishini, iLupu Idolophu, kwiYuhuan County, kwiPhondo laseZhejiang, China